Dagaal beeleed ka dhex qarxay ciidamada maamulka Juba ee Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal beeleed ka dhex qarxay ciidamada maamulka Juba ee Kismaayo
Kismaayo – Mareeg.com: Ciidamo ka wada tirsan maamulka KMG ah ee Juba ayaa manta iskula dhacay magaalada Kismaayo ee xarrunta gobolka Jubada Hoose.
Goob joogayaal kusugan magaalada Kismaayo ayaa ku waramay in dagaalka uu ka dhashay askari dilay askari kale, waxaana markaas kadib goobta gurmad ku tegay ciidamo ay is xigeen askariga la dilay oo dagaal la galay ciidamo kale oo xigta ay yihiin askariga dilka geystay.
Iska horimaad muddo socday ayaa dhexmaray labada dhinac, waxaana dagaalka si weyn looga dareemay gudaha magaalada Kismaayo, isagoo samaeyn badan ku yeeshay xaafadii uu ka dhacay.
Maleeshiyaadka maamulka Juba ee dagaallamay ayaa kazoo kala jeeda beelaha Ogaadeen iyo Majeerteen.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, inka badan 20 kalana waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegayaan warar dagaal kazoo baxay, iyadoo laga cabsi qabo in khasaaruhu intaas ka badnaado.
Howl-wadeennada Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca oo isugu jira shacab iyo dhinacyada dagaallamay.
Dagaalka oo isu badelay mid beeleed ayaa waraka ka imaanaya Kismaayo sheegayaan in magaalada laga saaray maleeshiyada mid ka mid ah labada beelood ee dagaallamay, waxeyna u baxeen meel gees ka ah magaalada.
Dagaal nuucaan oo kale ah ayaa sanadkii hore magaalada looga saaray maleeshiyo kazoo jeeda mid ka mid ah beelaha magaalada deganaa, kuwaasoo uu gogaaminayey Barre Hiiraale, waxaana manta magaalada laga saaray maleeshiyo kazoo jeeda beel kale.
Ilaa iyo hada majirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha maamulka KMG ah ee Juba ee ka arrimiya gobolkaas. Kismaayo ayaa caan ku ah colaadaha, hase ahaatee deganaasho ayaa ka jirtay bilihii lasoo dhaafay.